Nepal Deep | अनि वीपीले भने- मुलुकमा बलेको गणतन्त्रको आगोले भतभत पोलिरहेछ…
अनि वीपीले भने- मुलुकमा बलेको गणतन्त्रको आगोले भतभत पोलिरहेछ…
मंगलबार, जेष्ठ १७ २०७९
भन त भरत कति पीडा भइरहेको होला मलाई ??
आज जेठ १५ गते, नेपालको गणतन्त्र दिवस। आजकै दिन पारेर २०६५ शालमा नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरिएको र त्यसको सट्टामा सयौं भुरे टाकुरे राजाहरुको शासनको बीज रोपिएको दिन। त्यसपछिका हरेक र्ष मुलुकले यसलाई राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व दिदै आइएको छ।
गणतन्त्रको अवैध सन्तानको रुपमा जन्मिएको संघियता अब विस्तारै जवान हुदैछ। यो जति जवान हुदैछ त्यति त्यति नै यसको चेहरा कुरुप हुँदै गएको छ। हुँदाहुँदा आम नागरिकलाई उसको मुहार मात्र होइन नामै देखि घृणा जाग्न थालेको छ, कुनै दिन यो घृणाले अग्निको रुप धारण गरि ताण्डव मच्चाउन थाल्यो भने कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ।
साँझ पख म टहलिदैं बीपी चोक तिर जाँदै थिँए, मेरो आँखा अलिक टाढा देखिएको उज्यालो प्रती तानिए, के रहेछ भनी खुट्टाको चाल र ताल बढाए। जसै बीपी चोक पुगे अनि देखे सडकभरी बालिएका मैनबत्तीहरु।
त्यतिकैमा मेरो आँखा जननायक स्व.बीपी कोइरालाको शालिकमा पर्‍यो। सालिकको चारैतिर मैनवत्तीहरु राखिएका थिए, ती पनि आधाजसो निभी सकेका थिए। आफ्नो स्थुल देह नेपालको माटोमा बिलिन नहुन्जेल सम्म संबैधानिक राजतन्त्र हिमायती उनको शालिक अगाडि उभिएको थिए म। अनायासै डर लाग्यो।
आँखा जुधाएर त्यो सालिकलाई हेर्ने हिम्मत सम्म भएन मलाई। डराई डराई मनमनै सोधेँ , तपाईंलाई कस्तो लाइराछ सान्दाज्यू? कानमा कतै टाढाबाट कुनै आवाज ठोक्किएको महसुस भयो; ‘मृत्यु पर्यन्त पनि यो मुलुकको हितको लागि, अखण्डता र संरक्षणको लागि म संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहे। तर यी पापीहरुले आज मेरो प्रतिमा वरिपरि गणतन्त्रको बत्ती बालिदिए। मुलुकलाई जसरी गणतन्त्रको आगोले भतभत पोलिरहेछ, भरत। मलाई पनि त्यस्तै छ। म पिडाले आहत छु, मेरो सुक्ष्म शरीर भतभती पोलिरहेछ। मेरो लागि यो भन्दा ठूलो पीडा र कठोर यातना के होला भन न, भरत?’